Al-Shabaab oo Magacaawday Guddiga La Dagaalanka Coronavirus +Akhriso – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Al-Shabaab oo Magacaawday Guddiga La Dagaalanka Coronavirus +Akhriso
Allhadaaftimo May 14, 2020 Uncategorized
Al-Shabaab ayaa Magacawday guddi loogu talagalay La socodka xaalada cudurka Karoona Virus xilli uu cudurka ku faafayo gobollada gaar ahaan deegaano ay ka maamulan Maamul Gobaleedyada Dalka.
Sidoo kale Al-Shabaab ayaa sheegtay sababta ugu weyn ee ku kaliftay iney Gudigan Ku dhawaaqaan iney tahay Dad badan oo ugu yimid magaalooyinka cudurka laga sheegay sida Muqdisho, Jowhar Iyo Kismaayo.
“Iyadoo laga ambaqaadayo xaaladaha caafimaad darro ee kusoo korortay dunida, gaar ahaan cudurka Korona ee boqolaalka kun ee qofood ku dilay dunida dalacalladeeda, saamayntiisuna ay soo gaartay bariga Afrika ayaa waxaa arrinka cudurkaas kulamo ka yeeshay Maktabka Siyaasada iyo Wilaayaatka ee Xarakada Al-Shabaab” ayaa lagu yiri.
Guddigan oo ka kooban todoba xubnood oo iskugu jira dhakhaatiir, culumo iyo waxgarad, ayaa waxaa loo xilsaaray in ay ka hawlgalaan ka warqabka xaaladaha caafimaad ee deegaanada Iyo degmooyinka ay Maamulaan Al-Shabaab iyo ka talabixinta hadba wixii soo kordha.
Sidoo kale Madaxda Al-Shabaab ayaa ku amray Maamulada Goobaha ay maamusho Xarakada iney la Shaqeeyaan gudigaas, una fududeeyaan Howlahooda Shaqo.
Dhanka kale Su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah Al-Shabaab ma heystaan qalabka lagu baaro Coronavirus, hadii ay helaan qof qaba Cudurka dilaaga ah Maxey ku Sameyn doonan.?
Previous Sarkaal Milatari oo lagu dilay dagaal xalay Muqdisho ku dhexmaray ciidamada dowladda.
Next Wasarada Macdanta G Sanaag Gaadhi lagala baxsaday o odayaal !!!!